Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny voicemail WhatsApp Voambolana - Manoro hevitra avy amin'ny Semalt Expert
Nahatsiaro fanandramana hacking na tranga marobe ireo mpampiasa aterineto. Ny fanafihana malware iray dia ny trompetra momba ny voicemail WhatsApp. Misy ny mailaka milaza fa misy voicemail avy amin'ny WhatsApp. Ny mailaka dia mampiahiahy satria manana ny toetoetran'ny trangan-javatra malware izy. Ny mailaka dia mikendry ireo mpisera tsy maotina amin'ny WhatsApp sy mailaka. Ny mailaka dia manana bokotra "Play". Ny mpampiasa aterineto dia voatendry hihaino ny voicemail amin'ny alàlan'ny klioban'ny bokotra "Play". Rehefa manindry ny bokotra "Play" ny mpampiasa, izy dia miantso amin'ny tranonkala maloto. Ivan Konovalov, Semalt Mpitantana Success Manager, dia manasongadina fa ny tanjon'ny fandaharana dia ny mamitaka ny mpampiasa aterineto amin'ny fampidinana ny malware. Ny voka-dratsy dia manimba ny asan'ny ordinatera na ny fitaovana finday avy amin'ny mpampiasa aterineto.
Sarotra ny atin'ny aterineto satria ny malware mampiahiahy dia alefa amin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny fidirana amin'ny aterineto. Ireo mpiserasera mampiasa Internet amin'ny alàlan'ny smartphones dia mahazo malware isan-karazany avy amin'ireo mpampiasa izay manana tablette, solosaina na ordinatera.
Mampiasa ny Google Android Operating System ny mpampiasa izay mora ampiasain'ny malware. Ny fitsabahana amin'ny voicemail WhatsApp dia mandefa ireo mpampiasa aterineto hanindry ny rohy Internet..Rehefa tsindry ny rohy dia alefa ny rakitra fantatra amin'ny hoe "Browser 6.5". Ny fametrahana dia manomboka rehefa manindry ny bokotra "Agree" izay miseho eo amin'ny efijery amin'ny fitaovana finday na solosaina. Ny trangan-javatra malware dia mandefa hafatra an-tsoratra amin'ny laharan-telefaonin'ny mpampiasa indrindra. Voampanga ho an'ny tolotra rehetra rehetra atolotra izy ireo avy eo taorian'ny famoahana ireo hafatra an-tsoratra. Ny trompety WhatsApp dia mitohy taorian'ny fametrahana ny "Browser 6.5." Izany dia satria miezaka mampiditra malware kokoa amin'ny fitaovana ampiasain'ireo mpampiasa aterineto ireo hackers.
Ny hackers amin'ny aterineto koa dia liana amin'ny jailbroken iPhone. Ireo fitaovana ireo dia manatsara ny fahamendrehan'ny mpampiasa aterineto satria azo ampiasaina hametrahana apps izay tsy mety hita ao amin'ny Apple App Store. Ireo mpampiasa aterineto izay manana iPhones tsy voafehy dia voaro amin'ny trangan-javatra malware. Ny fiarovana dia satria ireo fitaovana an-tsokosoko iPhone tsy mitongilana dia manome tsy mahomby amin'ny fanandramana hacking.
Ireo mpampiasa ny ordinateran'ny Apple Desktop dia omena amin'ny tranonkala iray amin'ny aterineto izay manondro fa ny programa malware dia tsy mifanaraka amin'ny Apple OS. Ny mpampiasa ny finday Apple, finday, ary Desktop dia voaro amin'ny trangan-javatra malware. Na dia izany aza, mbola zava-dehibe ho an'ireo mpampiasa aterineto ny tsy hitsahatra amin'ny fanindriana ny "Tsia" na "Tsia". Tokony hotandremana ny fepetra fanampiny satria mitohy mitombo ny fanandramana hacking amin'ny fitaovana finday noho ny fandrosoana amin'ny teknolojian'ny rindrambaiko. Misy ny antoka azo antoka fa ho sarotra kokoa ny fanandramana hacking amin'ny ho avy mba hikendrena fitaovana amin'ny aterineto hafa izay tsy voakasik'io aretina malware io amin'izao fotoana izao
Maro ny mpampiasa aterineto no voakasika tamin'ny fanesoana voicemail WhatsApp. Ireo tra-boina amin'ny trangan-javatra malware dia entanina hizara ny vaovao amin'ny mailaka hafa sy WhatsApp mpampiasa. Ny fifanakalozan-kevitra mety amin'ny mpampiasa aterineto dia manan-danja amin'ny fisorohana ny habetsaky ny aterineto vokatry ny fanafihana hacking na malware Source .